Ihlane nokuzola enyakatho yeSweden
Gällivare S, Norrbottens län, i-Sweden
Hlala phakathi nehlathi endaweni ethule, eyimfihlo eduze nechibi.
Phila njengoba abantu babevame ukwenza kudala: Basa umlilo esitofini, thethani izinkuni namanzi, gezani nge-sauna eshisayo.
- Ikotishi likaGöte endaweni ebukekayo neyimfihlo eduze nechibi
- I-sauna yaseLapland efakwe ngokhuni
- Izinkuni zokubasa kokubili i-cottage ne-sauna
- Ukukhanyisa kwe-Solar cell kuhlanganisa. ukushaja-i-USB yefoni ephathekayo
- Amathawula, ilineni lombhede, amaduvethi, imicamelo
- Ibhola lebhola
- Indawo yokupaka mahhala
I-YouTube - Sesha i-"Götes stuga"
Ikotishi likaGöte limaphakathi neLapland futhi likunikeza ithuba lokuphila njengakudala.
Ukha amanzi okuphuza echibini bese ugeza endaweni yokugeza ngezinkuni.
Kukhona indlu yangasese yangaphandle enomsebenzi wokuhlukanisa, ngemuva kwekotishi.
Ukukhanyisa kunikwa amandla amaseli elanga nezibani ze-LED, kulula futhi kulula.
Thola ukuthula nokuthula emvelweni enhle. Nqamula i-wifi futhi uxhume uxhumano lwemvelo esikhundleni salokho.
Kuyisizini ephezulu unyaka wonke, ngakho ukhetha ukuthi iyiphi isizini ekuheha kakhulu.
Kokubili i-sauna nekotishi kunamavulandi anokubukwa okuhle kwechibi elincane lehlathi.
Kukhona amatafula nezihlalo, ezilungele ukudla kwakusihlwa noma ukuhlala nje futhi ujabulele ukubuka.
Eduze kwendlu ka-Göte kunemifudlana embalwa egeleza kanye ne-Råne Älv.
Ingenye yemifula yaseSweden ehlanzekile enokudoba okuhle kokumpunga, i-salmon, i-pike kanye ne-perch.
Indawo futhi ingeyeNatura 2000.
Ukuba seduze kwe-Muddus National Park, eyingxenye yeNdawo Yamagugu Omhlaba Yase-Laponia, kwenza indlu ka-Göte ibe isiqalo esihle sezinto zasehlane.
Ibanga eliya eMuddus lingamakhilomitha angama-30 kuphela ukusuka endlini encane.
OKWENGEZIWE NGE-NICE COTTAGE
Isitofu sensimbi esisansimbi sibaselwa ngezinkuni futhi sinikeza ukufudumala okunethezeka ngisho nalapho isiphepho seqhwa sinesiyezi ngaphandle kwendlwana. Ukukhanyisa okunethezekile endlini encane okuthola kumalambu asebenza ngamaseli elanga.
Ukudla kuphekwa ngesitofu segesi futhi kunesiqandisi segesi esigcina ukudla kubanda ehlobo.
Ebusika, ukudla kungafakwa ngaphandle esiqandisini esihlosiwe, esisebenza njengesiqandisi semvelo.
Kukhona ne-charcoal grill, kulabo abathanda ukugcoba. Letha namalahle noma uthenge esitolo segrosa sasendaweni esigodini.
I-sauna ibaselwa ngezinkuni futhi inethangi lamanzi elingamalitha angu-20, lapho amanzi afudumala khona ngenkathi uvutha esitofini. Lapha ugeza ngamanzi ashisayo ezitsheni zokugeza futhi ujabulele isitimu esishisayo.
I-sauna itholakala eduze kwechibi ngakho-ke kuhle ngokucwiliswa ngokushesha ukuze ufudumale ku-sauna futhi.
Ebusika, kuqabula ngempela ukugingqika eqhweni! Uma ufisa.. :-)
Ukugeza kwe-sauna kuhlanza kokubili umzimba nomphefumulo.
Ukuphumula ngendlela emangalisayo!
Ithiphu! Thatha ithuba lokuletha amanzi ashisayo ku-counter ngaphakathi kwe-cottage, ngemva kokuqedwa kokugeza kwe-sauna.
Kunekamelo lokulala elinombhede owubhantshi kanye nosofa wasekhishini kamkhulu omdala, okuyindawo ethokomele kakhulu yokulala!
Sekukonke kunemibhede ethokomele emi-5 lapho kufakwe khona iduvet, imicamelo nelineni lombhede kanye nethawula enanini.
UMSEBENZI WAPHANDLE KANYE NESITOREJI SOMKHUNI
Indlu yangasese yangaphandle inengaphakathi elithokomele futhi inokwehlukana komchamo neziqukathi ezimbili ezihlukene.
Umchamo uphuma ngepayipi uye ebhokisini letshe elingaphandle kwesakhiwo. Indle phansi esitsheni esingemuva, esivundisiwe.
Fafaza isipuni esingu-1 sethosti esitsheni esingemuva ngemva kokuvakasha.
QAPHELA! Hhayi engxenyeni yomchamo wangaphambili, kuzoba nokuma ngokuphelele ngaleso sikhathi.
Sizama ukuvuselela izinto ezindala kanye nefenisha ngangokunokwenzeka.
Yonke imfucumfucu nokudla okusele kuhlelwa lapho kuvela khona bese kugaywa kabusha. Izitsha zitholakala kokubili ngaphakathi kwendlwana kanye naseshedini elingaphandle / ishede lezinkuni.
Imfucumfucu yokudla iyavundiswa bese iphendulwa inhlabathi yokutshala amazambane, i-kale, ubhontshisi obanzi kanye namatheniphu, phakathi kwezinye izinto.
Sisebenzisa izinto zokuhlanza ezivumelana nemvelo, amabhulashi esitsha enziwe ngezinto zemvelo nezindwangu eziwashekayo.
"Izikhwama zepulasitiki" ziyavundiswa.
Kungenzeka ukusebenzisa amanzi olwandle njengamanzi okuphuza. Noma ubani ofisa angathola amanzi ompompi ngamathini angu-10 litre esikhundleni salokho.
Kubaluleke kakhulu ukuthi ungangcolisi ichibi, ngokwesibonelo, ukugeza izinwele zakho nge-shampoo noma ukuziphonse emanzini okugeza.
Uphonsa amanzi esitsha ebhokisini letshe, elingakwesokudla sendlu yangasese yangaphandle.
Imijikelezo nokugaywa kabusha kugqobhoza emkhathini wendlwana ka-Göte futhi okuningi kugcinwa esimweni sako sasekuqaleni kusukela ngesikhathi lapho kwakhiwa khona ikotishi.
Ishede lezinkuni, indlu yangasese yangaphandle kanye nokuhlelwa kwemithombo kusesakhiweni esifanayo amamitha ambalwa ngemuva kwekotishi.
Sifuna ngempela ukuzama ukwenza konke esingakwenza ukunciphisa ukubhebhetheka kweCovid-19.
Impilo ibalulekile kukho kokubili izivakashi zethu nakithi.
Ngakho-ke senza ukuhlanza nokukhucululwa kwendle kwekotishi, isauna kanye nendlu yangasese yangaphandle ngokwenqubo yokuhlanza eyizinyathelo ezi-5 eklanywe i-Airbnb.
Izihlanzi eziqinisekisiwe nezibulala amagciwane zisetshenziselwa le njongo.
UKUNEZEKWA OKWENGEZIWE HLALA E-COTTAGE
- Umshini wokuwasha nebhokisi lesiqandisi kungaqashwa emzini womninindlu, uma uhlala isikhathi eside.
Ilondolo: 80 SEK ngokuwasha ngakunye
Isiqandisi: 80 SEK ngosuku.
- Isitofu sikadizili sinikeza ukushisa okulinganayo endlini encane usuku lonke. Lokhu kungaqashwa ngenkokhelo engu-150 SEK ngosuku.
5.0 ·24 okushiwo abanye
5.0 · 24 okushiwo abanye
BHEKA ENCWADINI YAMI YOMHLAHLANDLELA!
Bamba iqhaza kwisenzeko esinamandla semvelo sase-Lapland kusukela ekotishi lika-Göte. Unyaka wonke, kunezinkathi zonyaka ezikhethekile okufanele ubhekane nazo, ehlobo nasebusika.
Lapha uhlala enyakatho nje ye-Arctic Circle ezweni elangeni laphakathi kwamabili elinobusuku basehlobo obukhanyayo, obukhazimulayo, obucwebezela izilwane zasendle.
Kuwumuzwa omuhle ngalobu busuku behlobo obukhanyayo, obunikeza amandla amaningi!
Phakathi nenkathi yamajikijolo ngoJulayi kuya kuSepthemba, kukhona amajikijolo anovithamini ongawakha ngemuva kwendlwana. Lapha ungathola ama-blueberries, ama-lingonberry, ama-cloudberries nama-cranberries.
Hamba ngokukhululeka ehlathini noma endleleni eseduze nekotishi, elikuholela endleleni yendawo yedolobhana. Ukuvakasha ezintabeni zasehlathini eduze nekotishi kukunikeza imibono nokuxhumana okuseduze nemvelo.
Phakathi namahora amnyama phakathi nobusika, ungajabulela izibani zasenyakatho zidansa esibhakabhakeni. Uhlala umile futhi ubheka izibani zasenyakatho, nakuba ukubonile ukuphila kwakho konke.
Uma isimo sezulu sihlanzekile, kufanelekile ukuthi uphume ukuze uthole leli thuba. Kuyamangalisa ngaso sonke isikhathi!
Futhi kuwumuzwa okhethekile kakhulu ukubona ukukhanya kwenyanga egcwele isakaza izithunzi ezimangalisayo endaweni. Kukhanya kangangokuthi ungakwazi ukufunda iphephandaba.
Ngezikhathi zakusihlwa zasebusika lapho isibhakabhaka sicwebile futhi singenafu, ungabona isibhakabhaka esinezinkanyezi ezimangalisayo.
Azikho izibani eziphazamisayo ezivela emadolobheni noma izibani zomgwaqo eduze kwendlu ka-Göte, ngakho isibhakabhaka esigcwele izinkanyezi siyavuleka ngempela.
Okumlingo, okungaqondakali kanye nenganekwane.
Eduze kwendlwana kunemifudlana emincane embalwa egeleza kanye ne-Råne Älv. Ingenye yemifula yaseSweden ehlanzekile enokudoba okuhle kokumpunga, i-salmon, i-pike kanye ne-perch.
Le ndawo futhi ingeye-Natura 2000. Ukuba seduze kwe-Muddus National Park, eyingxenye ye-Laponia World Heritage Area, kwenza ikotishi lika-Göte libe isiqalo esihle sezinto zasehlane.
Ibanga eliya e-Muddus lingamakhilomitha angama-30 kuphela, lapho uzothola khona izinhlobo eziningi zezindawo zokuhlala nokuhlukahluka kwezindawo kanye nezilwane zasendle ezicebile.
Izilimi: English, Suomi, Norsk, Svenska